Halisyo Cusub Oo Laga Soo Sheegay Isticmaalka Taleefoonada Caqliga leh “Smartphones” | Xaqiiqonews
TIKNOOLAJIHalisyo Cusub Oo Laga Soo Sheegay Isticmaalka Taleefoonada Caqliga...
Halisyo Cusub Oo Laga Soo Sheegay Isticmaalka Taleefoonada Caqliga leh “Smartphones”
Wili waxaa si isdaba joog ah u soo baxaya daraasadaha ku saabsan waxyeelada taleefoonada caqliga leh ee loo yaqaan “Smartphones” waxana digniinihii ugu dambeeyey soo saaray machad Sweden laga leeyahay oo baaritaan ku sameeyey qalabkan.
Daraasadda uu soo saaray machadkan ayaa waxa ay tilmaameysaa in Iftiinka taleefonadan ay ku yeeshaan saameyn xun xasuusta qofka.
Cilmi-baarayaashu waxay daraasad ku sameeyeen xiriirka ka dhexeeya shucaac (RF-EMF) ee taleefannada casriga ah iyo xasuusta , waxayna ogaadeen in isticmaalka qalabkan muddo 12 bilood gudaheeda, ay raad xun ku reebtay maskaxda dhallinyaro da’doodu tahay 12 ilaa 17 sano.
Sida xaqiiqonews ay ka soo tarjuntay Wargeyska theMirror ee ingiriiska ka soo baxa daraasadda ayaa waxaa ka qeyb galay 700 oo kuray iyo kashaanti isugu jira, waxeyna socotay muddo sanad ah oo kaliya la baarayey hadii iftiinka taleefoonada caqliga leh uu saameyn ku yeelanaayo xasuusta iyo inkale.
Sida laga soo xigtay natiijooyinka, shucaaca gelaya dhegta isticmaalaha taleefanka ayaa sababi karta cillad xusuus ah sida lagu ogaaday baaritaanka lagu sameeyey gabdhaha iyo wiilashada daraasadda ka qeyb qaatay.